प्रोफाइलभित्र छिरेर, मान्छेभन्दा राम्रो फोटो छानेर, भँगेरे अक्षरमा बधाई नलेख्न अनुरोध गर्दछु । - VON TV
१५ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १७:५९ 869 ??? ???????
– नारायण गाउँले , बेलायत।
एनआरएनएका एनसिसी र आइसिसीले विभिन्न टास्कफोर्स या विषय समिति बनाएको खबर पढ्न पाइन्छ ।
धेरै मान्छे ती समितिमा हुनुहुन्छ । शायद म पनि कुनैमा हुन सक्छु । आफ्नो नाम आउनेबित्तिकै पत्रिकामा समाचार लेख्न लगाउने र त्यसलाई ट्याग र शेयर गरेर बधाई लिँदै रमाउने जमात पनि निकै ठूलो रहेछ । अझ रोचक त के छ भने हिजोसम्म समस्यै समस्या भएको लेख्नेहरू आफ्नो नाम एउटा कुनै समितिमा देख्नेबित्तिकै भयङ्कर सकारात्मक बनेर निस्केका छन् ।
न त्यो आफैमा कुनै उपलब्धि हो, न ती निर्वाचित पद हुन् । यस्ता समिति धेरै वर्षदेखि बन्दै आएका पनि छन् र तिनले धेरै माखा घाइते बनाएको सुनिएको छैन । हामी आफै पनि नयाँ, अनटेस्टेड या फ्रेस नाम होइनौं । हामी अहिंसक भएकाले हाम्रो नाममा पनि ज्यादै नै धेरै माखाको मृत्यु दर्ज छ जस्तो लाग्दैन ।
कुनै टास्क फोर्समा नाम हुनु जिम्मेबारी त हो तर बधाईको विषय हो जस्तो लाग्दैन । बनाउनेले पनि टास्क फोर्स बनाउनु नै ठूलो काम भएजस्तो मानेको पनि देखियो । यहाँ त रमाइलो के भने बनाउनेले बन्नेलाई र बन्नेले बनाउनेलाई प्रसंशा र बधाई बाँडेका छन् । खादा लगाएको तस्बीर टाँसेका छन् । तिनको काममा बधाई दिन पाइयोस् र पो !
गाईंगुईं सुन्दा म पनि कुनै टास्क फोर्समा छु जस्तो लाग्यो र यति लेख्ने हिम्मत आयो । नत्र त आफूले नपाएकाले तुष पोखेको भन्ने पनि कम हुँदैनन् ।
कतै मेरो नाम देखिएन भने हाइसुख्खै भयो, संयोगवश भेटियो भने प्रोफ़ाइलभित्र छिरेर, मान्छेभन्दा राम्रो फोटो छानेर, भँगेरे अक्षरमा बधाई नलेख्न यसै टिप्पणीमार्फ़त अनुरोध गर्दछु ।
कोरोना संक्रमणबाट जोगिने उपाय र सरकारको दायित्व
एनआरएनए पोर्चुगल : आर्थिक खातापाता सबै हरायो, हिसाबकिताब गोलमाल
कोरोना रोकथामका लागि नेपाल सरकारलाई गैरआवासीय नेपाली संघको एक करोड सहयोग
नेपाली विद्यार्थीहरुलाई सम्भव भए सहयोग गरौं, नसके हौसला दिऔ !
नेपालमा कोरोना भाइरस : शुन्यलाई शुन्यमै राख्न चलचित्रकर्मी नवल खड्काका ६ टिप्स !
कोरोनाको कहरः एनआरएनए बेल्जियमले नेपाली समुदायमा मास्क वितरणदेखि समस्यामा परेकाहरुको सम्पिङ् समेत गरिदिने !
भर्खरै अष्ट्रेलिया आएका र सहाराविहीन विद्यार्थीलाई एनआरएन अष्ट्रेलियाले ३० दिन निःशुल्क खाना खुवाउने
यसकारण स्पेनमा कोरोना संक्रमण फैलियो , सरकारले सूचना लुकाउनु नै महाभुल !